milina fanaovana embossing varavarana
Ity milina ity dia mety indrindra amin'ny embossing varavarana vy. Ny fitaovana dia manana rafitra henjana tsara sy avo lenta, fiainana avo ary azo itokisana. Ny fizotry ny embossing ho an'ny vy metaly dia mihaona famokarana 3 / andro ..
Fantsom-bozaka tsy mitera-by
5000T mangatsiaka manamboatra press hydraulic, ampiasaina amin'ny vilany fampidirana ambany, vilany tsy miraikitra. Eo ambany tsindry, tsindrio miaraka ny metaly roa. Ny vilany misy ifotony dia mifandray amin'ny sosona loharano hafanana ary mamindra haingana ny hafanana, izay afaka hahatonga ny hafanana sy ny fizarana mari-pana hitovy. Ny sosona ao anaty vilany dia malama, mahazaka akanjo, tsy mora harafesina ary tsy hamokatra fitambarana manimba ny fahasalaman'ny olombelona